Bathmate X30 – MM Online Shopping
လူ ကြီး မင်းတို့ ၏ လိင်တန်ကို ၆ပတ်တာကာလအကြာတွင်း သိသာစွာ ကြီး ရှည် စေမဲ့ Bath mate X 30 လာပါပြီးခင်ဗျာ။
နိုင်ငံ တကာတွင်လူ ကြိုက်အများဆုံး နဲ့ သုံးဖူးသူ တိုင်း အကြိုက်တွေ့နှစ်သက်ကျတဲ့ ပစ္စည်းကောင်းတစ်လက်နှင့် မိတ်ဆက်ပေးပါရစေခင်ဗျာ
Bathmate X 30
ဘာကြောင့် Bathmateက သာမာန်ပြောင်းတွေထက်စာရင် လိင်တန်ကို ကြီးထွားဖို့အတွက် ပိုမိုထိရောက်ရသနည်း ?????
အဘယ်ကြောင့် တခြားပြောင်းများကဲ့သို့ များများလေ့ကျင့်စရာမလို့ပဲ တစ်ရက်ကို ၁၅ မိနစ်လေ့ကျင့်ရုံဖြင့် ရက်သတ္တပတ် ၆ ပတ်အကြာတွင် ကြီးထွားရှည်လျားရသနည်း ?????
အထက်ပါမေးခွန်းလေးတွေ့ကို ဖြေကြားဖို့အတွက် ဖွားဖက်တော်ကို ကြီးထွားလာစေရတဲ့အကြောင်းရင်းလေးကို ရှင်းပြပါရစေခင်ဗျာ။
ပုံမှန်အားဖြင့် လိင်တန်တွင်အကန့်၃ကန့်ရှိ ပါတယ်။ထို့အကန့်များသည် ထောင်မတ်နေစဉ် အတောအတွင်း သွေးများဖြင့်ပြည့်နေပြီး ကြီးမားပြန့်ကားလာတတ်ပါတယ်ထို့သို့သော အနေအထားများကြောင့်လည်း လိင်တန်သည် နဂိုအနေအထားထက်စာရင် ကြီးမားရှည်းလျားလာပါသည်။
လေ့ကျင့်ပြောင်းများကို ပုံမှန်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် ထို့အကန့်များကို ကြီးမားကျယ်ပြန့်စေပီး ဖွားဖက်တော်ကို ပိုမိုကြီးထွားရှည်လျားလာစေမှာပါ
သို့သော်ငြားလည်း လေ့ကျင့်ပြောင်းတိုင်းရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မူနူန်းကတော့ မတူညီကြပါ။
Bathmateသည် သိပ္ပံနည်းစနစ်တကျ ရေရဲ့ သိပ်သည်းဆကို စနစ်တကျ တွက်ချက်ကာ ထည့်သွင်း ပေါင်းစပ်ထားသောကြောင်း သာမာန်ပြောင်းများ ထက်စာရင် လေရဲ့ ဖိအား အဆ ၂၀ ပါဝင်နေပါသည်။
ထို့ကြောင့်လည်း တရက်ကို ၁၅ မိနစ်လေ့ကျင့်ရုံဖြင့် အချိန်တိုတိုအတွင်းမှာ ပိုကောင်းသော ရလဒ်ကို ရရှိစေပါသည်။
……………..# အသုံးပြုနည်း # ……………….
အဆင့် ၁ ။
ရိုးရိုးရေနွေး(မပူလွန်း ၊မအေးလွန်း ၊ပုံမှန် ရေလည်းရပါသည် ) ထဲမှာ အရင်ဆုံး ရေချိုးပါ။
Bathmate ကို ရေဖြင့် ဖြည့်ပါ ။
ရေဖြည့်နေစဉ် လက်ချောင်းဖြင့် အလယ်က pressure valve (အဆိုရှင်လေးကို ဖိထားပေးပါ)
လိင်တန်ကို ပြောင်းအထဲသို့ ထည့်ပါ။
လိင်တန်နှင့် ခန္တာကိုယ်ကြာတွင် ရော်ဘာကွင်းကို ထားပါ။
အဆင့် ၄ ။
အဆိုရှင်ကြောင့် ရေသည် တွန်းကန်သောအခါ
ပင်မ လိင်တန် ဆီသို့ တွန်းပါ
Tube တောင့်ထဲတွင် လိင်တန်သည် တက်လိုက်ကျလိုက်ဖြစ်နေလိမ့်မည်။
ထိုနောက်ဖိအားသည် ထောင်မတ်ခြင်းကို စတင်စေသည်။
အထက်ပါအနေအထားအတိုင်း၁၅ မိနစ်တိတိ နေပါ။
အဆင့် ၅ ။
ပြောင်းအားလိင်တန်မှ ပြန်လည် ဖယ်ရှားပေးပါ။
ဖိအားကို လျှော့ချစေရန် အဆိုရှင့်ကို ဖိပါ။
လက်ဖြင့် bathmate အား ကြာရှည်ကိုင်မထားချင်သူများအနေဖြင့် ဖိုင်ကြိုးကို အသုံးပြု၍ လည်း မတ်တပ်ရပ်ပြီးရေချိုးနိုင်ပါသည်။
ဖိုင်ကြိုးကြောင့် လက်သည် bathmate ကို ကိုင်ထားရန် မလိုဘဲ သက်တောင့်သက်သာ ရေချိုးနိုင်သည်။
အသုံးပြုနည်းပုံကို cb မှာတဆင့်တောင်းယူနိုင်ပါသည်။
# အသုံးမပြုသင့်သောသူများ #
သင့်အနေနဲ့ အောက်ဖော်ပြပါ ရောဂါဝေဒနာများရှိနေပါက အသုံးမပြုသင့်ပါ။
အကယ်၍ အသုံးပြုလိုပါကလည်း မိမိရဲ့မိသားစုဆရာဝန်နှင့် အရင်ဆုံးဆွေးနွေးတိုင်ပင်သင့်ပါသည်။
နှလုံးရောဂါ ၊ အဆုတ်ရောဂါ ၊ သွေးကင်ဆာ ၊ သွေးတိုး လေဖျန်းခြင်း ၊ ဝက်ရူးပြန်ရောဂါ သို့မဟုတ် အတက်ရောဂါရှိသူများ ၊ လိင်နှင့် ဆီးပိုင်းဆိုင်ရာ ရောဂါရှိသူများ ၊ ဆီးချိုရောဂါဝေဒနာရှင်များ ၊ သွေးကျဲဆေး သောက်သုံးနေသူများ ၊ သွေးအားနည်းရောဂါရှိသူများ ၊ သွေးမတိတ်သည့်ရောဂါရှိသူများ အပြင် လိင်အင်္ဂါ တဝိုက် နာကျင်မူ ခံစားချက် မရှိဘဲ ထုံနေသောသူများ ။
# အသုံးပြုစဉ်လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်အချက်များ #
တခါအသုံးပြုလျှင် ၁၅မိနစ် ၊ အများဆုံးမိနစ် ၂၀ ထက် ဆက်တိုက်ပိုအသုံးမပြုရ။
တရက်တွင် တကြိမ်သာလေ့ကျင့်ပေးရန် အလွန်အမင်းသုံးစွဲပါက အတွင်းကြေနိုင်သဖြင့် သတ်မှတ်ထားသော မိနစ်အပိုင်းအခြားထက်ပိုပြီး အသုံးပြုခြင်းမပြုရ။
အသုံးပြုနေစဉ်အတောအတွင်း အိပ်မပျော်သွားစေရန် အထူးသတိပြုရန်။
ယမကာ သို့မဟုတ် ဆေးဝါးများ မှီဝဲထားပါက အသုံးပြုလေ့ကျင့်ခြင်းမပြုရ။
လက်နှစ်ဖက်စလုံးအသုံးပြုပီးမှာ ကိရိယာကို ထိပ်တွင်
တပ်ဆင်ပေးရမည်ဖြစ်သဖြင့် လက်တဖက်ပြတ်များ အသုံးမပြုသင့်ပါ။
‪#‎Pump အား ပြန်လည် ထိန်းသိမ်း သိမ်းဆည်းထားရာတွင် လိုက်နာရမည်အချက် #
၁ အသုံးပြုပြီးနောက် မီးခိုးရောင်အတံလေးကို အလယ်တွင်ပြန်ထားရန်။
၂ရေများကို ကုန်စင်အောင် သွန်ပစ်ရန်။
၃ pumpကို ဆပ်ပြာရေနွေးနွေးလေးဖြင့်သန့်စင်အောင် ဆေးကြောပေးရန်။
၄Pumpကို ခြောက်သွေ့စင်ကြယ်အောင်ထားပြီး ခြောက်သွေ့သော နေရာတွင် သိမ်းဆည်းထားရန်နှင့် နေေ၇ာင် တိုက်ရိုက်ကျရောက်နိုင်သော နေရာများကို ရှောင်ရှားပေးရန်။
Be the first to review “Bathmate X30” Cancel reply